Etu ị ga -esi nweta akwụkwọ ikike enyere njem njem? e-Gọọmentị Njikwa ikike Asambodo Akwụkwọ ikike | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEtu ị ga-esi nye gị ikike iji njem njem? e-Gọọmentị Ikikere enyocha Asambodo Njikwa
19 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Etu ị ga -esi nweta akwụkwọ ikike enyere njem njem? e-Gọọmentị Njikwa Ikikere Ọchịchị: Ihe dị gị mkpa iji nweta akwụkwọ ikike njem njem? Kedu onye nwere ike inweta akwụkwọ ikike njem ahụ?
OLEE onye nwere ike inweta oge izu ike?
Ministri nke ime obodo zigara ndị gọvanọ ọzọ okirikiri, na-edepụta ihe na-agaghị egbochi mgbochi ịbanye na ụgbọ. Na okirikiri, nke gụnyere ihe dị iche gbasara ngwa ahụ, ndị mmadụ ga - enweta ikike njem bụ ndị edepụtara dị ka ndị a:
Ndị a gbapụrụ n’ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ha ma chọọ ịlaghachi n’ebe obibi ha, ndị dọkịta na-edenye ma ọ bụ ndị natara ọkwa na nchịkwa dọkịta.
Ndị ahụ ga-aga njem olili nke onwe ya ma ọ bụ nwunye ya, ndị ikwu mbụ nwụrụ ma ọ bụ nwanne ya nwoke.
Ndị ga-eso nyefe olili ozu ahụ, ọ bụrụhaala na ha karịrị mmadụ 4, belụsọ ndị ihe kpatara ọnwụ ya bụ coronavirus.
Ndị chọrọ ịrụcha ọrụ agha ma laghachi n'obodo ha.
Ndị a na-akpọ ka ha bịa na nkwekọrịta ụbọchị nkeonwe ma ọ bụ nke ọha.
Ndị ahụ tọhapụrụ n'ụlọ ọrụ ntaramahụhụ
Mgbe o mechara site na mba ofesi, ubochi iri na anọ nke nlere na nlekota ulo oru ndi Ebe Ego Nzi na Ndi Ozo, ebe edobere ha.
Akwụkwọ ikike ahụ pere mpe maka ndị njem nọ n'ụgbọ ala nkeonwe.
Itinye aka na uzo e-Government.
Pịa ebe a iji nweta akwụkwọ ozi oge izu ike TRAVEL
Ihe ngosi mgbasa ozi: Ịzụ ahịa Kiosk ụdị Smart Stop Display
Yakutuye Ski Ski na TRT Screen
Ịdọ aka ná ntị maka ndị ọkwọ ụgbọala si na ihuenyo City Ankara
Ikike maka ndị na-egwu Amateur na-egwu egwu na ụgbọ oloko Metro na Ankara
A machibidoro ịkwụsị njem Intercation? Kedu mgbe a ga-ebulite mmachi njem na mpaghara 15?
Kwa afọ a na-akwụ ụgwọ iwu gbanwere!
Ozi nke Ụgbọ njem maka ụgbọ okporo ígwè